भाइरसको नयाँ भेरियन्ट भेटीए पछि सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी, हुन् सक्छ लकडाउन ? – Nep Stok
पुष २३, २०७८ शुक्रबार 216
नेपालमा पछिल्लो पटक २४ जनामा भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन संक्रमितमध्ये केही स्थानीयसमेत रहेको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकालेर पुस लागेयता संकलित ११४६ पोजेटिभ नमुनाहरूको एस जिन स्क्रिनिङ गर्दा उक्त संख्यामा ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको पुष्टि गरेको छ।
‘देशभरबाट संकलित नमुनाहरुमध्ये उक्त संख्यामा ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको हो,’ डा. पौडेलले भने, ‘देखिएकामध्ये केही विदेशबाट आएका र केही स्थानीय पनि छन्। यसको संकेत समुदायस्तरमा पनि ओमिक्रोन देखिन थाल्यो भन्ने हो।’
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनलाई एकदमै संक्रामक भाइरस मानिन्छ। छिमेकी भारतमा यही भेरियन्टका कारण दैनिक एक लाखको हाराहारीमा संक्रमण देखिन थालिसकेको छ। नेपालमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि शुक्रबार भाइरस संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको बैठक समेत बसिरहेको छ।
यो बैठकले नयाँ लहर फैलिन नदिने सम्भावित विकल्प र कदमहरू चाल्न सक्नेछ। यो बैठक अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता बसिरहेको छ। आवस्यकता परेको खण्डमा खतरा रहेका ठाउँमा लकडाउन गर्ने या केहि मापदण्ड बनाउने बिषयमा पनि छलफल हुने भएको छ ।
छिमेकी भारतबाट आएका सयौँ नागरिकमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले सतर्कताका उपाय खोज्न थालेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्राले ओमिक्रोन भेरियन्टबाट हुन सक्ने बिरामीको अ’त्यधिक चापलाई ख्याल गर्दै सबै अस्पतालहरुलाई उच्च तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको जानकार दिएकी छन्।
मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण र अक्सिजनसहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्न पनि देशभरका अस्पताललाई सर्कुलर गरेको छ।संकलित नमुनामध्ये प्रदेश नम्बर १ बाट ९, प्रदेश २ को वीरगञ्जबाट ४३, लुम्बिनी प्रदेशको दाङबाट २० नमुना जीन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको बेलहैया नाकाबाट २८, नेपालगञ्चस्थित भेरी अस्पतालबाट १० र पाल्पाबाट ५ नमुना जिन सिक्वेन्सिङका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका भैरहवाका ल्याब इन्चार्ज प्रेमकुमार यादवले भने, ‘संकलित नमुनामध्ये केही रिपोर्टमा ओमिक्रोन देखिएको छ। संख्या एकीन भएको छैन।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट पनि जिन सिक्वेन्सिङका लागि काठमाडौं नमुना पठाइएको छ।
Prev२२ वर्षीया युसिना र प्रेमी २५ वर्षीय अनिषको मृत्युको कारण खुल्यो
Nextसंक्रमण बढ्न थालेपछि सिसिएमसिसीको बैठकले भर्खरै गर्यो यस्तो निर्णय